သင်္ကြန်မိုးကို ကူလွမ်းကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားများ (ရုပ်/သံ)
ချီလီနိုင်ငံ Valparasio မြို့ မီးအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်း
ချီလီနိုင်ငံ၊ Valparaiso ဆိပ်ကမ်းမြို့ မီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မြင်ကွင်း။ (ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၄)
ချီလီနိုင်ငံ Santiago မြို့တော်ရဲ့ အနောက်မြောက်ဖက် ၇၅ မိုင်လောက်မှာတည်ရှိတဲ့ Valparaiso ဗလ် ပါရာအီဆို ဆိပ်ကမ်းမြို့မှာ မီးအကြီးအကျယ် လောင်ကျွမ်းနေလို့ ၂ ယောက်သေဆုံးပြီး အိမ်ခြေ ၅၀၀ လောက် ပျက်စီးသွားပါတယ်။
Pacific သမုဒ္ဒရာဖက်က လေပြင်း တိုက်ခတ်နေတာကြောင့် မီးကိုနိုင်အောင်ငြိမ်းသတ်နိုင်ဖို့ မီးသတ်တွေက ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားနေရပါတယ်။ မြို့ရဲ့ အနေအထားကြောင့်လည်း မီးသတ်တွေ အခက်တွေ့နေပါတယ်။
Valparaiso မြို့က လူအများအပြားနေကြတဲ့နေရာတွေဟာ မတ်စောက်တဲ့တောင်စောင်းတွေနဲ့ ပတ်လည်ဝိုင်းနေပါတယ်။ သမ္မတ Michele
Bachelet က Valparaiso မှာ အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခဲ့ပြီး မီးလောင်နေစဉ် ဝင်ရောက် လုယက်တာတွေ မဖြစ်အောင် လမ်းတွေမှာ စစ်တပ်တွေကို ချထားပါတယ်။
လူပေါင်း ၅ ထောင်လောက် မီးဘေးကင်းရာကို ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေကလည်း မီးဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေ လုပ်ပေးနေပါတယ်။
Valparaiso မြို့သမိုင်းမှာ အဆိုးဆုံး မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်တယ်လို့ မြို့တော်ဝန် ဟော်ဟေး (Jorge Castro) ကပြောပါတယ်။ စနေနေ့ကတည်းက ခုချိန်ထိ
လောင်ကျွမ်းနေတဲ့မီးကြောင့် ဓါတ်အားလိုင်းတွေလည်း ပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းနဲ့ ၂၀ ရာစု အစောပိုင်းကတည်းက ဆောက်ထားတဲ့ ဆေးရောင်စုံနဲ့အိမ်တွေ၊ ကျောက်တွေနဲ့ ခင်းထားတဲ့လမ်းတွေ၊
ဒေါင်လိုက် နီးပါး ဖြစ်နေတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာ ပြေးဆွဲနေတဲ့ ဓါတ်ရထားတွေကြောင့် Valparaiso မြို့ကို အမွေအနှစ် ထိမ်းသိမ်းရမဲ့နေရာတခုအဖြစ် UNESCO က သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
လက်နက်ကိုင် ရုရှားလိုလားသူတွေ ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်း Kramatorsk မြို့က ရဲစခန်းကို ဝင်ရောက်စီးနင်းစဉ်။ (ဧပြီလ ၁၂၊ ၂၀၁၄)
ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းက Slovyansk မြို့မှာ ယူကရိန်းအထူးတပ်တွေနဲ့ ရုရှား လိုလားတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကြား အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ၂ ဖက်လုံးမှာ အသေအပျောက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။
ယူကရိန်းအထူးလုံခြုံရေးအရာရှိတယောက် သေဆုံးပြီး နောက်ထပ် ၅ ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ယူကရိန်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး Arsen Avakov ကပြောပါတယ်။ ရုရှား လိုလားတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေဖက်ကလဲ ၁ ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီး ၂ ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ Slovyansk မြို့ကရဲစခန်းတခုနဲ့ ရုရှား နွယ်ဖွားတွေ အများစု နေထိုင်ကြတဲ့ Donetsk နဲ့ Kramatorsk မြို့တွေက အစိုးရအဆောက်အဦးတွေထဲ ရုရှား လိုလားတဲ့ သေနတ်သမားတွေ ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး နောက်တနေ့ဖြစ်တဲ့ ဒီနေ့မှာ ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းမှာ ခုလို မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတာပါ။
ဒေသတွင်း တင်းမာမှုတွေ တိုးလာတဲ့အပေါ် အလွန်အမင်း စိုးရိမ်တယ်လို့ နေတိုးအဖွဲ့ အကြီးအကဲ Anders Fogh Rasmussen ကပြောကြားခဲ့ပြီး ပြဿနာနည်းသွားအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ ယူကရိန်းနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့ ရုရှား တပ်ထောင်နဲ့ချီကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ ရုရှား အစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
မောင်မောင်ဆိုလေ ထီးရိုးရှည် (ရဲရဲတောက်သံချပ် ရုပ်/သံ များ)
မောင်မောင်ဆိုလေ ထီးရိုးရှည် အပိုင်း(၁)
မောင်မောင်ဆိုလေ ထီးရိုးရှည် အပိုင်း(၂)
အလှော်ခံပြည်သူ တွေ ဘယ်သူ့လင်တော်လို့ ဘယ်သူ့အဖေ ခေါ်ရပါ့မလဲ ?
မောင်မောင်ဆိုလေ ထီးရိုးရှည် သံချပ်အဖွဲ့က ပြည်သူ့ကိုယ့်စား ရင်ဖွင့်သီဆိုထားပါတယ်
မောင်မောင်ဆိုလေ ထီးရိုးရှည် အပိုင်း(၃)
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ကြား ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရင်း ပြည်သူတွေ မြေဇာပင်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကို မောင်မောင်ဆိုလေ ထီးရိုးရှည် သံချပ်အဖွဲ့က သရုပ်ပြပုံဖော်ထားပါတယ်။
မောင်မောင်ဆိုလေ ထီးရိုးရှည် အပိုင်း(၄) -
အဖိအနှိပ်ခံတောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ ဘ၀ကို မောင်မောင်ဆိုလေ ထီးရိုးရှည် သံချပ်အဖွဲ့က သရုပ်ပြတင်ဆက်ထားပါတယ်...
အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့တော်မှာ နိုင်ငံတ၀ှမ်းက လူပေါင်း ၂ သောင်းလောက် ပါဝင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲ ဧပြီလ ၁၃ နေ့မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရရဲ့ အိုးအိမ်စီမံကိန်း၊ အလုပ်အကိုင် အစီအစဉ်နဲ့ လူမှုဖူလုံရေး အစီအစဉ်တွေအပေါ် မကျေနပ်လို့ ဆန္ဒပြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလမှာ အာဏာရလာတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် မတ္တီရို ရန်ဇီ လက်ထက်မှာ ပထမဆုံး ပေါ်ပေါက်လာ တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကို ကယ်တင်ဖို့ ဆိုရင် အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကို အရင်ဆုံး ဦးစားပေး ဖြေရှင်ေးပးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀န်ချုပ်ချုပ်ဟာ သူ့ရှေ့က ၀န်ကြီးချုပ်တွေလိုပဲ ဒီပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း မရှိပါဘူးလို့ ဆန္ဒပြသမားတယောက်က ပြောပါတယ်။ အဓိက လမ်းမတွေကို ပိတ်ပြီး ဆန္ဒပြပွဲတွေ ပေါ်ပေါက်နေတဲ့အတွက် လိုင်းကား ၄၀ လောက်ဟာ ပုံမှန်လမ်းကြောင်းတွေကို ပြောင်းလဲပြီး ပြေးဆွဲနေရပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာလည်း ထိခိုက်နေပါတယ်။ ဈေးတွေ၊ ဆိုင်ခန်းတွေကို ပိတ်ထားရပါတယ်၊ ရဲအင်အား ၁၅၀၀ ကိုလည်း စေလွှတ်ပြီး ထိန်းသိမ်း ခိုင်းထားရတယ်လို့ သတင်းတွေက ဆိုပါတယ်။
ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့နဲ့ ၁၃ ရက်နေ့တွေမှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ နိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံးမှာ ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။ လေယာဉ်လိုင်းတွေ၊ ရထားလိုင်းတွေရဲ့ သပိတ်တွေလည်း ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့က စလို့ ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ မြို့ငယ်တချုို့မှာ ကျောင်းတွေကို အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်ထားရပါတယ်။
နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၁၃
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီအချိန် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ ဆိတ်ဖူးကျေးရွာ၊ ကိုတူခွတဲတိုက်နေ ၀င်းလှိုင်(၃၇)နှစ်၏တောင်ယာတဲအား တောမီးကူးစက်လောင်ကျွမ်းရာမှ ၎င်း၏ဇနီးဖြစ်သူ မမိုးသူဇာ(၃၅)နှစ်သည် မီးလောင်ဒဏ်ရာဖြင့်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရ၍ တောင်တွင်းကြီးမြို့မရဲစခန်း၊ သေမှုသေခင်းအမှတ်(၁၀/၂၀၁၄)ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ အမှုအားစစ်ဆေးရာ ၀င်းလှိုင်၏တဲမှာ တောမီးကူးစက်သည့်အနေအထားမတွေ့ရခြင်းနှင့် သက်သေများ၏ထွက်ဆိုချက်များအရ ၀င်းလှိုင်အား ဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ စစ်ဆေးချက်အရ ဖျာဝယ်သည့်ကိစ္စနှင့်စကားများကြရာ ၀င်းလှိုင်မှအရက်မူးကာ မမိုးသူဇာအား ဖျာပေါ်တွင်ထိုင်ခိုင်းပြီးဖျာလိပ်၏အဖျားတစ်ဖက်အား ဓါတ်ဆီလောင်း၍ ဂတ်စ်မီးခြစ်ဖြင့်ခြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်မှုကြောင့် ဓါတ်ဆီအငွေ့ဟပ်ပြီး ဖျာလိပ်အားမီးလောင်ရာမှတစ်ဆင့် မမိုးသူဇာအား မီးကူးစက် လောင်ကျွမ်းသေဆုံးသွားကြောင်းနှင့် ၀င်းလှိုင်အား တောင်တွင်ကြီးမြို့မရဲစခန်း(ပ)၇၉/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှု ပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် ပြောင်းလဲအမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
12.4.2014 ညနေ ငါးနာရီသုံးဆယ့်ငါး မီးစက်ကုန်းလမ်း ယာဉ်တိုက်မှု အမျိုးသမီးနှစ်ဦးမှာ wave100ဆိုင်ကယ် taxi ဖြင့် ပေါင်းသုံးဦးစီးနင်လာပြီး ၊ ယာဉ်တိုက်သူ အမျိုးသမီးမှာ toyota brevis
ဓာတ်ပုံ- ကိုဥက္ကာကျော်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်
သရုပ်ဆောင် ဆုပန်ထွာနဲ့ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းခဲ့တဲ့ ကိုဥက္ကာကျော်က ဖေ့စ်ဘုတ်လောကကို ဘယ်လို သုံးသပ်ပြောကြားသလဲဆိုတာ သူ့ဖေ့စ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကျွန်တော့ရဲ့ ဇနီးလောင်းနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ Photo လေးပါ။ ဟုတ်ကဲ့! ကျွန်တော် ရုပ် မချောပါဘူး။ ရုပ်ချော ရင် ကျွန်တော် ရုပ်ရှင်မင်းသားလုပ်မှာပေါ့။ ဒါတွေထားလိုက်ပါ။ ပန်ပန့်ကို အရမ်းချစ်တယ်။ ဒီပုံလေးက ကျွန်တော့ အတွက် အမှတ်တရ ပုံလေးပါ။ မနာလိုတဲ့လူတွေကတော့ မကောင်းမြင်မှာပဲလေ။ ရေးချင် တာ ရေးကြပါစေ။ ဒါဟာ Facebook ပဲ။ ခုခေတ်က ကွမ်းယာသည်တောင် Facebook သုံးနိုင်တဲ့ ခေတ် ပဲလေ။ အမှန်တရားကိုမြင်နိုင်ကြပါစေဗျာ။
လို့ ကိုဥက္ကာကျော်က သူ့ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေ ပြောထားတာပါ။
ဆက်စပ်သတင်း - အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေသော သရုပ်ဆောင် ဆုပန်ထွာသတင်းနှင့် ပါတ်သတ်၍ ကိုဥက္ကာကျော်မှ ဖြေရှင်းချက်
အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ် အီတလီ အမျိုးသား တစ်ယောက်ကို သူ့ရဲ့ အိမ်နီးချင်း ၁၂ ယောက်လောက်က တရားစွဲဆိုခဲ့တယ်လို့ သတင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ ၎င်းအမျိုးသား ချစ်တင်းနှောချိန်မှာ ညည်းငြူတဲ့ အသံက အလွန်ကျယ်လောင်လို့ပါ။ အိမ်နီးချင်း ၁၂ ယောက်လောက်ထိအောင် တရားစွဲရတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လောက်ကျယ်မလဲဆိုတာတောင် တွေးကြည့်ဖို့ ခက်မယ်ထင်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ ညည်းငြူသံဟာ တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းပြီး ကောင်းမွန်လှတဲ့ ကွန်ဒိုမီနီယမ်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အနားဝန်းကျင်က လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပြောပြချက်အရ
တစ်ကယ်ပါပဲ၊ သူ့ကောင်မလေးရဲ့ အော်သံဟာ ဒီတိုက်မှာရှိတဲ့ လူတွေကို တော်တော် နေထိုင်ရခက်စေပါတယ်။
ရလဒ်အနေနဲ့ကတော့ ချစ်တင်းနှောတဲ့ အမျိုးသားက ထောင်ခြောက်လ ကျခံစေရန် တရားရုံးက ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ယုံရခက်ပေမယ့် ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ ထောင်ကျတာ ဒါပထမဆုံးအကြိမ် မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဆက်စပ်သတင်း -->ပြူတင်းပေါက်မှာ ချစ်တင်းနှောနေစဉ် ပြုတ်ကျသေဆုံးသော စုံတွဲ
၇.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၀၃၀ အချိန်ခန့်တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေ ဦးသိန်းနိုင်ဦးသည် မိသားစုနှင့်အတူ မှော်ဘီမြို့နယ်၊အောက်ဝါးနက်ချောင်း
ကျေးရွာရှိ ဓမ္မဒူတဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် အလှူလုပ်ကာ သံဃာများ
အားဆွမ်းကပ်နေစဉ် ဆွမ်းစားဆောင်ဒုတိယထပ် အပေါက်ဝရှိ ပစ္စည်းတင် စင်ပေါ်တွင် တင်ထားသော အတွင်း၌ငွေများထည့်ထားသည့် ပိုက်ဆံ
အိတ်(၅)လုံး စုစုပေါင်းတန်ဖိုး ငွေကျပ်(၁၇၉၅၅၀၀)မှာ ပျောက်ဆုံးနေသည်
ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့် ခိုးယူသူအား အရေးယူပေးပါရန် တိုင်းတန်းလာခဲ့ပါသည်။
တိုင်တန်းချက်အရ မှော်ဘီမြို့မရဲစခန်း(ပ)၂၀၃/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ၃၈၀ ဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ်ကာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို စုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့စုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူမှာ အောင်ကျော်သက်၊ (၂၃)နှစ်၊ (ဘ)ဦးလှဝင်း၊ ဘိုကလေးမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
နေသူဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသဖြင့် စုံစမ်းရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး သက်သေခံ
ပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းကာ ဆက်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
သင်္ကြန်အကြိုနေ့တွင် ရေကစားနေကြသူများအား ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း ရှိရေကစားမဏ္ဍပ်တွင်တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ - ဟိန်းထက်)
ဧပြီ ၁၂ ရက်ညနေ ၄ နာရီမိနစ်၂ဝ ခန့်က နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ဇေယျာသီရိမြို့နယ်တွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်ရာမှ လေနှင့်အတူမိုးရွာခြင်း၊မိုးသီးကြွေကျခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။သဲကြီးမဲကြီးရွာသော မိုးနှင့်အတူ ပမာဏ အတော်ကြီးသော ဖန်ဂေါ်လီလုံးခန့် မိုးသီးများ အဆက်မပြတ် ကြွေကျလာကြောင်းသိရသည်။ လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် သစ်ပင်ကျိုးကျခြင်းများရှိခဲ့ကြောင်း မိုးရွာမှုမှာ နာရီဝက်ကျော်ကျော်ခန့် ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းကလည်း ဆီးသီးအရွယ် မိုးသီးကြွေကျခဲ့သည်။ ယခုပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းကလည်း ရမည်းသင်းမြို့နယ်တွင် ကြက်ဥအရွယ်အစား အတော်ကြီးသော မိုးသီးများ ကြွေကျမှုကြောင့် စပျစ်စိုက်ခင်းများ ပျက်စီးရပါကြောင်း ရမည်းသင်းမြို့နယ်နေသူတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ယခုလို မိုးသီးကြွေကျမှုကြောင့် နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းရှိ ဖရဲ၊ ဂေါ်ဖီနှင့်အခြားသီးနှံ စိုက်တောင်သူများမှာ သီးနှံများ ပျက်စီးမည်ကို စိုးရိမ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရေကစားမဏ္ဍပ်များ စည်းကမ်းဖောက်လျှင်ပိတ်သိမ်းမည်အထိ အရေးယူမည်
သင်္ကြန်ကာလအတွင်း ရေကစားမဏ္ဍပ်များအနေဖြင့် သတ်မှတ်စည်းကမ်းများ လိုက်နာမှုမရှိလျှင် ပိတ်သိမ်းသည်အထိ အရေးယူခံရနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သင်္ကြန်ကာလ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆပ်ကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
''ဒီနှစ်သင်္ကြန် ရန်ကုန်မြို့မှာ မဏ္ဍပ်ကြီး ၅၄ ခု၊ မဏ္ဍပ်လတ် ၃၉ ခုနဲ့ မဏ္ဍပ်ငယ် ၆ဝ ဆောက်လုပ် ထားပါတယ်။ သင်္ကြန်ကာလမှာ ရေကစားမဏ္ဍပ်တွေလိုက်နာနိုင်ရန် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆပ်ကော်မတီက စည်းကမ်းချက် (၅၁) ချက်ထုတ်ပြန်ပေးထားပါတယ်။ ရေကစားမဏ္ဍပ်တွေအနေနဲ့ ဒီစည်းကမ်းချက်တွေကို လိုက်နာဖို့လိုပါတယ်။လိုက်နာမှုမရှိတဲ့ မဏ္ဍပ်တွေကို ရေဖြတ်မယ်၊ မီးဖြတ်မယ်၊ နောက်ဆုံး မဏ္ဍပ်ကိုပိတ်သိမ်းသည်အထိ အရေးယူသွားနိုင်ပါ တယ်'' ဟု ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်မှ ဒုတိယရဲမှူးကြီး ဝင်းကြည်က ပြောသည်။
ရေကစားမဏ္ဍပ်များတွင် လုံခြုံရေးအတွက် CCTV ကင်မရာများ တပ်ဆင်ထားသည့်အပြင် ကိုယ်ပိုင် လုံခြုံရေး (Private Security) များလည်း ချထားကြောင်း၊ ရေကစားမဏ္ဍပ်များအနီးအရက်၊ ဘီယာများ ရောင်းချမှုကို တွေ့ရှိပါက အားလုံးဖမ်းဆီးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရေကစားမဏ္ဍပ်များ၌ လေပေါင် ၁ဝဝ မှ ၁၅ဝအထိ အတင်အချ ပြုလုပ်၍ရသည့်ကွန်ပရက်ဆာပန့်များဖြင့် ရေပက်
ကစားခြင်းကြောင့် ရေစူးအား ပြင်းထန်ပြီးရေပက်ခံရသူတွင် အသားအရေများ၊မျက်လုံးနှင့်နားများထိခိုက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သဖြင့်
ရေကစားမဏ္ဍပ်များ၊ ရေပက်ခံကားများတွင် ကွန်ပရက်ဆာပန့် အသုံးမပြုရန် တားမြစ်ထားသည်။
ယခုနှစ် သင်္ကြန်ကာလအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌မဏ္ဍပ်များ လုံခြုံရေးအတွက်လုံခြုံရေးအင်အား၅ဝဝဝ ကျော် ဖြန့်ကြက်တာဝန်
ချထားကြောင်း၊အချို့မှာ အရပ်ဝတ်ဖြင့် လုံခြုံရေး တာဝန်ထမ်း ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ သင်္ကြန်ကာလအတွင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွား၍ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တရားရုံးနှင့် ဆေးရုံဆေးခန်းများလည်း အသင့်ဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။